အမှတ်တရ- ရွာ့ ပြက္ခဒိန် လုပ်ကြစို့ – Calendar | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » အမှတ်တရ- ရွာ့ ပြက္ခဒိန် လုပ်ကြစို့ – Calendar	97
အမှတ်တရ- ရွာ့ ပြက္ခဒိန် လုပ်ကြစို့ – Calendar
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 25, 2015 in Business & Economics, History, Think Different | 97 comments
ရွာ အမှတ်တရမို့.. ဆွေးနွေးပေးကြပါ
.ကျနော့် ဆွေတော်မျိုးတော် ရွာသူားများနဲ့ တိုင်ပင်စရာ ၁ခု ရှိလို့ပါ။
.ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေး အကြံပေးကြပါအုန်း။
.၁ယောက်၁လက်လည်း ကူနိုင်တဲ့ အပိုင်းက ဝင်ကူပေးပါအုန်း။
.ကျနော်တို့ မြန်မာ့ဂဇက် Members အနေနဲ့ ပြက္ခဒိန်လေး ထုတ်မလားလို့ပါ။
.လာမယ့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် ပြက္ခဒိန်ပေါ့။
.ပုံလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာသုံးပြီး အမှတ်တရအဖြစ် ထုတ်မယ်။
.ရွာသူားတွေရဲ့ အိမ်နံရံထက်မှာ ချိတ်ထားခြင်းအားဖြင့် .အမှတ်၁ရတစ်ခုလည်း ဖြစ်သွားမယ်။ ၁နှစ်စာအတွက်လည်း အသုံးဝင်မယ်ပေါ့။
.ပြက္ခဒိန်အတွက် ပုံရိပ် ၁၃ ခုလောက် အနည်းဆုံး သုံးရမယ်ထင်တယ်။
.ဆယ့်နှစ်လအတွက် လ-၁လကို စာမျက်နှာ၁ခု ဖန်တီးမယ်။ အဲ့ဒီ စာမျက်နှာမှာ .ပုံက အပေါ်၁ပိုင်းက ပုံ၁ပုံ။
.အောက်၁ပိုင်းမှာတော့ အဲဒီလအတွက် နေ့စွဲတွေပေါ့။
.ဆိုတော့ ပထမဆုံးမျက်နှာဖုံးကို members တွေ့ဆုံပွဲမှာ စုပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို .သုံးမလားလို့။
.နောက် အတွင်းပိုင်းမှာတော့ နေ့စွဲတွေနဲ့ > တွဲဖို့ ပုံ ၁၂ ပုံကိုတော့ … ရွာထဲက .ဓါတ်ပုံဆရာတွေဆီကနေ ပုံလေးတွေ အလှူခံပြီး သုံးချင်တယ်။
.ဓါတ်ပုံဆရာများ ပုံရိပ်လေးတွေ သုံးဖို့အတွက် လှူမယ်မဟုတ်လားခင်ဗျ။
.ဥပမာ နွေရာသီအတွက် > နွေဆန်တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ….
.မိုးရာသီအတွက် > မိုး ဆန်တဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေ….
.ဆောင်းရာသီအတွက် > ဆောင်းဆန်တဲ့ ပုံရိပ်တွေပေါ့…
.ဖြစ်နိုင်ရင် ပုံပေါ်မှာ ကဗျာဆန်ဆန် စာသားလှလှလေးတွေ ရေးချင်ပါသေးတယ်။
.ဥပမာ > ဇန်နဝါရီမှာ…
.ကံ ကြည်လင်စွာ ကောင်းပါစေကြောင်း….
.အဲဒီအတွက် ရွာထဲက ကဗျာဆရာ/စာဆရာတွေနဲ့ တိုင်ပင်ချင်ပါတယ်။
.ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သင့်တော်ရာ ပုံရိပ်လှလှလေးတွေ ၊ .စာသားလှလှလေးတွေ ရွေးချယ်ဖို့ ဒီဇိုင်းဖန်တီးဖို့…
.ရွာထဲက ဒီဇိုင်နာအစ်ကိုတော် အစ်မတော်တို့ကိုလည်း .အကူအညီတောင်းပါ့မယ်။
.ဆိုတော့ အမှတ်၁ရ ပြက္ခဒိန် ထုတ်ဖို့ သဘောတူ မတူ .Comment ရေးပေးကြပါခင်ဗျ။
.သဘောတူသူ များရင် ထုတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ ။
.ထုတ်ဝေဖြစ်မယ်ဆိုရင်… အောက်ပါ အစီအစဉ်တွေကို ဆက် သွားပါမယ်။
.၁) ပြက္ခဒိန်မှာ သုံးဖို့ ပုံတွေ / စာသားတွေ – စုဆောင်း >ရွေးချယ် –
.၂) ဘယ်ပုံကို ဘယ်လ ဘယ်စာမျက်နှာမှာ ထားမယ်ဆိုတာ စီစဉ် –
.၃) ပြက္ခဒိန်အဖြစ် ပုံနှိပ် ထုတ်ပေးမယ့် ပုံနှိပ်တိုက်တစ်ခုခုကို အပ်ဖို့ ရံပုံငွေ .ကြိုတင်စုဆောင်း (ဒါကတော့ စိုက်ပေးထားနိုင်တဲ့တယောက်ယောက်က .စိုက်ပေးထားပေါ့နော့) –
.၄) ပြက္ခဒိန်အဖြစ် ပုံနှိပ် ထုတ်ပေးမယ့် ပုံနှိပ်တိုက်တခုခုကို အပ် –
.၅) ထွက်လာတဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်ပြီး .ကုန်ကျငွေ ပြန်ရအောင် ဈေးနှုန်း၁ခု သတ်မှတ် > .ရွာသူားတွေကို ပြန်ရောင်း> ရောင်းလို့ ပြန်ရတဲ့ ငွေကို
.ကနဦး စိုက်ထုတ်ပေးထားသူကို ပြန်ပေး –
.၆) ပြက္ခဒိန်လှလှလေးကို စားပွဲတွေမှာ ကိုယ်စီ ထောင် ဒန်တန့်တန်
* ပြက္ခဒိန်အတွက် သုံးမယ့် ရာသီရှုခင်း ပုံရိပ်လေး ၁၂ ပုံအတွက် ရွာသူားထဲက .ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေဆီက အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်။
.ဥပမာ – လေးပေါက် ၊ ကိုစိန်သော့၊အန်တီဝေ ၊ ကိုဂီ စသည်ဖြင့် … (၁ ယောက်ကို ၂ ပုံဆီလောက် ရွေးထုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ )
(ရွာရဲ့ ပန်းချီဆရာ ဆရာခေါင် ဆီကလည်း ပန်းချီကား သုံးစွဲခွင့်တောင်းထားပါတယ်။ ယူသုံးပါ ဆိုလို့… ပန်းချီကားလေးလည်း ပါ ပါအုန်းမယ်လို့.. )
* ပြက္ခဒိန်မှာ သုံးမယ့် ပုံတွေ ရလာရင်… ဘယ်လမှာ ဘယ်ပုံလေး .သုံးမယ်ဆိုတာကို လက်လှမ်းမှီရာ > ရွာသူားတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပါမယ်။
* ပြက္ခဒိန်ရဲ့ ပုံပေါ်မှာ လအလိုက် ကဗျာဆန်ဆန် .စာသားလှလှလေးတွေ ရေးပေးဖို့ ရွာသူား ကဗျာသမား၊ စာသမားတွေကို .အကူအညီတောင်းပါမယ်။
* အဲဒီ စာသားနဲ့ ပုံကို သင့်တော်ရာ တွဲစပ်ပြီး ဒီဇိုင်းဖန်တီးဖို့… ဒီဇိုင်းပိုင်း .ကျွမ်းကျင်တဲ့ အောင်မိုးသူတို့…အံဇာတုံးတို့ကို အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်။
*. ပြက္ခဒိန် ပုံနှိပ်ဖို့အတွက် ကနဦး လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို .ဦးကြီးမိုက်ဖြစ်ဖြစ်….အန်တီဒုံဖြစ်ဖြစ် အခြား ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ခဏ .စိုက်ပေးထားစေချင်ပါတယ်။
.ဒါမှမဟုတ် သူကြီးဖြစ်ဖြစ်…. အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့… .စိုက်ထုတ်ပေးမလား..
သူကြီးအနေနဲ့ us ထိ ယူပြီး သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာထည့်သူတွေကို လက်ဆောင် ပြန်ပေးလို့တောင် ရသေး
* ကုန်ကျစရိတ်ကို သူကြီးမင်း စိုက်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ပြက္ခဒိန်ကို .ရွာသူားတယောက်တစောင် လက်ဆောင် ရယူရုံပါပဲ။ ငွေပေး ဝယ်ယူစရာ .မလိုတော့ပါဘူး။
* ပြက္ခဒိန် ပုံနှိပ်ဖို့ ဘယ်မှာ ၁ စောင် ဘယ်လောက်ကျပြီး ဘယ်လိုဘယ်နည်း .ပုံနှိပ်မယ်ဆိုတာကို ကျနော် ဆက်လက်စုံစမ်းပေးပါမယ်။
.ရလာတဲ့အချက်အလက်ကို ဒီပိုစ့်ထဲမှာ ချပြ တိုင်ပင်ပါမယ်။
* လက်လှမ်းမှီရာ ရွာသူားဘယ်နယောက်လောက်အတွက် ဘယ်နစောင် .ပုံနှိပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။
(အရင်တခေါက်က အကျီ င်္ထုတ်တုန်းကလို … ယူမယ့်သူက စာရင်းပေး ၊ .စာရင်းထဲ ရသလောက်ပဲ ထုတ်တာ ပိုကောင်းမလားလို့…။
.စာရင်း ကောက်လို့ ရတာထက် စောင်ရေ ၂၀ လောက်တော့ .ပိုထုတ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ရုတ်တရက် ရွာထဲမဝင်လို့ .မသိလိုက်တဲ့ ရွာသူားတွေ
.နောက်ပိုင်း သိပြီး လိုချင်ရင် ပေးနိုင်အောင်ပါ။ )
ဒါက ကို.တောတွင်းပျော် အစဖော်တဲ့အကြံပါ
.သြဂုတ် ၂၃ ။ ၂၁၅ ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ငါ့ဆီဂဒေါ့ လအုပဲရမည်…
Novy says: – ကြော်ငြာ ထည့်ပါမယ် နိုဝင်ဘာလစာမျက်နှာဦးလိုက်ပြီနော်
@QUIL@ says: ဓမြဗိုလ်ဆီ အီးမဲ ပို့တဲ့ မကြီးဆန်း ရယ် (ဘယ်လယူမယ် မသိသေး)
နိုဝင်ဘာ ဦးထားတဲ့ မနိုရယ်
ဟုတ်ကဲ့ ၂လစာတော့ ရပါဘီ..
(ဒီဇိုင်းအကြမ်းပိုစ့် မနက်ဖြင် တင်ပါ့မယ်- ၂၀၁၅-၀၉-၀၂)
ကထူးဆန်း says: ဟုတ်ဘူး .. ကြော်ငြာ ထည့်မှာ မဟုတ်ဘူး ..လူမယ်ပေါတာပါ..
ကြော်ငြာ ၁၁ လ ဆက် ရောင်းပါ ..
nature says: ပြက္ခဒိန်က နှစ်ကျော်သွားရင် အမှိုက်တခုလိုအသုံးမ၀င်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီတော့ ရက်ကျော်သွားလည်း အသုံးဝင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ။ ဥပမာ စာအုပ်ဖုံး အဖြစ်အသုံးဝင်တာ နံရံမှာအလှကပ်ထားတာ သို့မဟုတ် တနည်းနည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအမှတ်တရ ပါအောင် အများလည်းအသုံးဝင်အောင် စဉ်းစားရင်ပိုကောင်းမယ်။
ဒန်ပေါက်အစိမ်းဖောက်ချက်နည်းလို အသုံးဝင်မည့် အများစိတ်ဝင်စားမည့်ဟင်းချက်နည်း ၃ ခုလောက်နဲ့ ရွာထဲက အများအကြိုက်ပိုစ့် ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောက်မေ့ဘွယ် နိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်လို့စွန့်ရစ်လေသလားလို ပိုစ့် အစိတ်အပိုင်းတခုသို့မဟုတ် အကျဉ်းချုပ်ထည့် :P
ဓါက်ပုံအတွက်ကတော့ ရွာထဲကမေတ္တာနဲ့ကူညီမည့်မော်ဒယ်တွေဆီအကူအညီတောင်းပေါ့။ အကျိုးအမြတ်ရရင်လည်း အနုပညာကြေး ခွဲပေပေါ့။
ပြက္ခဒိန်ဆိုတာ အစောင်ရေများလေ စရိပ်နည်းလေဆိုတော့ ဖြန့်ဝေသူတွေနဲ့နီးစပ်သူရှိရင် အစောင်ရေများများရိုက်ပြီးစီးပွားဖြစ်လုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်။ မန်းဂေဇက်လည်း ကြော်ငြာပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။
ကုန်ကျစရိပ်တွက်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုရှယ်ယာခေါ်။ ရှုံးရင်သူကြီးကိုစိုက်ခိုင်း ။ :P
pooch says: စားပွဲတင်ဆို အားပေးမယ် ပုံလည်း လိုချင်ရင် ရိုက်ထားတဲ့အထဲက ရေခဲတောင် ချင်းတောင်ရမယ် လိုချင်ရင်ပြောတာပါ ဟာဘာရေခဲတောင်ကတော့ တရုတ်ပြည်ဖြစ်နေတော့မပေးတော့ဘူး